Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Mamonjy ny Nosy Big Hawaii miaraka amina fizahan-tany lava
Tsy zava-baovao ny fizahan-tany volkano sy lava. Efa an-jatony taona maro izao ny mpizaha tany no nankany amin'ny volkano mavitrika, mba hijery lava lava.
Tsy zava-baovao ny fizahan-tany volkano sy lava. Efa an-jatony taona maro izao ny mpizahatany no nandeha tany amin'ny volkano mavitrika, mba hijery ny lava voarohirohy araka izay azo atao. Angamba ny mahasarika dia mitoetra amin'ny fahitana ny masontsika manokana momba ny fontsika eto an-tany. Ny fototry ny planetantsika dia efa nanakatra ny velarany ary miboiboika, mandrehitra ary indraindray mamoaka vatokely anidina amin'ny voninahiny rehetra.
Nahasarika ny vaovaon'ny vaovao isan'andro manerana an'izao tontolo izao hatramin'ny 3 Mey tamin'ity taona ity, ny asan'ny Volkano Kilauea ao amin'ny Nosy Lehibe Hawaii dia nampiditra ny olona tamin'ny fitaovana elektronika, fa ny hafa kosa nanao ny dia lavitra hijerena ilay hetsika volkano ho an'ny ny tenany.
Fa aleo atrehana, zavatra mampidi-doza ity, ity antsoina hoe lava ity. Rehefa mamakivaky ny crust an'ny tany izy dia eo anelanelan'ny 1,300 ka hatramin'ny 2,200 degre Fahrenheit ny mari-pana ao aminy. Ny vatolampy dia navadika ho volomboasary manjelanjelatra sy mena ary indraindray koa ny fotsy. Ary ireo vato ambonimbony rehefa tratry ny fipoahan'ny lava dia lasa balafomanga misidina avy any ivelany.
Zava-misy: Ny sambo feno mpizaha tany tamin'ny alatsinainy teo amin'ny morontsirak'i Pahoa, nosy Hawaii, izay nanao dia nataon'ny Lava Ocean Tours rehefa notoraham-bato tampoka izy ireo niaraka tamin'ny vato lehibe iray niantsona teo ambonin'ny tafon'ny lakandrano ary namaky izay nipetrahan'ny mpandeha. Olona XNUMX no naratra tamin'io fitsidihana io.
Na dia eo aza ny fisarihana ho an'ny fizahan-tany, ny andraikitry ny masoivohom-panjakana dia miantoka ny fiarovana amin'ny endrika hitazonana ny elanelana lavitra amin'ny hetsika volokano dia manelingelina ny orinasa eto amin'ny nosy. Mampihomehy, ny asa aman-draharaha mahasalama izay afaka manampy amin'ny familiana ireo fahasimbana efa nataon'i Kilauea. Trano 500 mahery no potika noho ny lalan'ny lava amin'izao fotoana izao ao amin'ny Nosy Lehibe miaraka amin'ireo toeram-pambolena sy làlana ary fotodrafitrasa.
Amin'izao fotoana izao, ny hany fomba hahitana ny lava dia amin'ny sambo na amin'ny rivotra. Ny orinasa ao amin'ny nosy Hawaii dia mangataka tranokala hijerena lava mba hitazomana ny fizotran'ny fizahan-tany, satria maro amin'ireo orinasa ireo no miankina amin'ny fizahan-tany mba hihazonana ny toe-karena ho salama.
Ny talen'ny fikarohana sy ny fampandrosoana any County County Hawaii dia nilaza fa efa niasa tamin'ny fananganana tranonkala toy izany izy ireo tao anatin'ny roa volana lasa izay. Izany dia mitaky fihaonana amin'ny fiarovana sivily sy ny mpahay siansa hamaritana toerana azo antoka ho an'ny toerana fizahan-tany toy izany. Ary tsy ny lava fotsiny no mila dinihina; io koa dia momba ny famoahana solifara izay mety hiteraka olana ara-pahasalamana izay tokony hamboarina amin'ny toerana ahafahana mampivelatra toerana toy izany. Azo inoana fa mila omena amin'ny sarimihetsika hijerena mpitsidika ny saron-tava fanivanana.
Hawaii Volcanoes National Park no Aloha manintona ny mpizahatany malaza indrindra amin'ny fanjakana, saingy ny fiasan'ny lava dia nahatonga ny fidirana amin'ny valan-javaboary nakatona mandrakizay. Mahatonga ireo mpitari-dia fizahan-tany, mpivarotra fivarotana ary trano fisakafoanana ho very orinasa amin'ny taha 50 ka hatramin'ny 90% ambany noho ny mahazatra.
Italia: Tsy ny divay ihany - labiera amin'ny firaisankina